Kooxda Barcelona ayaa gaartay guul qaali ah kadib markii ay ka badisay kooxda Athletic Bilbao… – Hagaag.com
Kooxda Barcelona ayaa gaartay guul qaali ah kadib markii ay ka badisay kooxda Athletic Bilbao…
Xiddiga reer Argentine Lionel Messi ayaa dhaliyay labo gool, taasoo u horseeday kooxdiisa Barcelona inay ka bediso kooxda Athletic Bilbao, iyagoo uga badiyey 3-2 fiidnimadii Arbacadii, ciyaar dib loo dhigay ee wareega labaad ee Horyaalka Spain.
Barcelona, ​​oo u aheyd guusheedii sagaalaad ee tartanka intii lagu jiray xilli ciyaareedkan, waxay leedahay 31 dhibcood 17 kulan oo ay ciyaartay, waxayna soo fariisatay kaalinta saddexaad, waxay 5 dhibcood ka hooseysa kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Real Madrid (kooxda difaacaneysa koobka), oo kaalinta labaad ku jirta.
Taas bedelkeeda, Athletic Bilbao waxay dhibcaheeda ku istaageen 21 dhibcood 18 kulan, waxayna ku jirtaa kaalinta sagaalaad.
Messi ayaa kor u qaaday rikoorkiisa gooldhalinta tartanka xilli ciyaareedkan isagoo ka dhigay 9 gool, si uu ula wadaago gooldhalinta tartanka Luis Suarez, Gerard Moreno iyo Iago Aspas, xiddigaha Atlético, Villarreal iyo Celta Vigo.
Shabakada Wararka, hagaag.com info @hagaag.com